Ministeera Dhimma Alaa: Lammileen biyya gara garaatti hidhaarra turan biyyatti deebiyaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Ministeera Dhimma Alaa: Lammileen biyya gara garaatti hidhaarra turan biyyatti deebiyaa jira
Goodayyaa suuraa Obbo Mallas Alam, Dubbi Himaa Ministeera Dhimma Alaa
Lammiileen Itoophiyaa biyyaalee garaagaraatti hidhaarra turan 2,000 ol gara biyyaati akka deebi'an taasifamaa jira.
Yaman, Taanzaaniyaa, Saa'udi Arabiyaa fi Liibiyaan immoo biyyaalee lammiileen kunneen hidhaarra itti jirani akka ta'an dubbi himaan ministeera dhimma alaa Obbo Mallas Alam Ibsa har'a kennaniin himaniiru.
Tibbanas lammiileen 205 Yaman keessatti ugguramanii turan gara biyyaati akka deebiyan taasifameera jedhan.
Ramaddii haarawaa dippilomaatotaaGama biraatin ministeerichi imbaasiiwwaniifi waajjiraalee qoonsilaa 59 fi waajjira olaanaa keessatti ramaddii hojjettootaa haaraa hojiirra oolchera.
Ramaddin hojjetootaa kun waajjiricha gara milkaa'inaatti ni ceesisa jennee amanna jedhan Dubbi Himaan Ministeera Dhimma alaa obbo Mallas Alam.
Ministeerichi faayidaa uummataa eegsisuun dabalataan dhaabbata lammiileen ittiin boonan ni ta'a jennee ammannas jedhan Obbo Mallas.
'Namni akka itti bahu beeka malee akka itti deebiyu hin beeku'
Rakkoo qaama miidhamtootaa kan furuu qabu 'ummatadha'
Dhorkaan booda gargaarsi nyaataa gara buufata doonii Yeman galeera
Ramaddii hojjettootaa haaraa kanaan diploomaatootni miisiyoonoota 59 keessa jiran 400 ol jiran wal jala jijjiijjiiramu.
Ramaddin diploomaatotaa kun walitti dhufeenya biyyaalee walin jiru guddisuu, iinagdee biyyaalee walin jiru,hirmaannaa lammiilee iddoo misiyoonotaa jiran guddisuu akkasumas diplomaasii aadaa bu'uura kan godhate dha.
Caaseffamni haaraan hojiirra oole hojjetaan misiyoonii tokko keessa hojjetaa ture wayita itti gaafatamummaa biyya itti ramadametti kennameef xumuru itti aansee eessatti akka ramadamu akka beekuu kan dandeesisu ta'uusaa Obbo Mallas himan.
Rammaddii hojjetootaan dabalataan rammaddiin ambaasaadarootaas dhiyeenyatti ni adeemsifama. Rammaddin ambaasaadarootaa kun hayyuulee biyya keessaa fi namoota bebbeekamoo biyyoota biroo keessa jiran of keessatti qabata.
Ramaddiin kunis dandeetti fi beekumsa ogummaa namoota ramadamanii bu'uura kan godhate ta'a jedhan Obbo Mallas Alam.
Hojiin diploomaasii dhimma nageenyaa walin hidhata guddaa kan qabu waan ta'eef namootni ramadaman faayidaa biyyattii kan eegsisan ta'u akka qabanis himaniiru.
Walitti dhufeenya biyyaalee ollaa walin qabnuuf dursa ni laanna kan jedhan dubbi himaan ministeerichaa biyyaalee ollaa keessatti diploomaatootni muxxannoo cimaa qaban akka ramadaman himan.
Diploomaatootni biyya ramadamanitti dubbatanii amansiisuu kan danda'an, biyyattiif bu'aa diinagdee fiduu kan danda'an akka ta'an eegamas jedhan.
Dabalataan hirmaannaa lammiilee biyya alaa jiran mirkaneessuu fi qabeenya humna namaa biyyaalee garaagaraa keessa jiru faayyidaarra oolchunis gahee diploomaatota irraa eegamu akka ta'e Obbo Mallas himaniiru.
Ministirri dhimma alaa caasefama fi ramaddii hojjettootaa haaraa fi lammiilee biyyaalee garaagaraatti hidhaarra jiran ilaalchisuun ibsa kennaa jira
Waraana Yemen: Erga dhorkaan kaafamee booda gaargaarsi nyaata inni jalqabaa gara buufata doonii galeera
Itoophiyaa: MM Dr Abiy Ahimad torban dhufu Awurooppaatti qajeeluuf
Godaantonni Itoophiyaa 46 qarqara galaana Yemenitti dhuman